July 2020 - Page 20 of 20 - Alinnpya
၁၇ နှစ်မိန်းမပျိုလေးကို ၆၆ နှစ်က ခြုံပုတ်အတွင်း တွန်းလှဲကာအဓမ္မပြုကျင့်
July 1, 2020 AlinnPya Comments Off on ၁၇ နှစ်မိန်းမပျိုလေးကို ၆၆ နှစ်က ခြုံပုတ်အတွင်း တွန်းလှဲကာအဓမ္မပြုကျင့်
၆၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားမှ ၁ရနှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့် ကျောက်တံခါးမြို့တွင် အသက် ၆၆ အရွယ်အမျိုးသားက အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဆိုမှုကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း ယနေ့ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဇွန် ၃၀ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲနွယ်ကုန်းမြို့နယ်၌ အသက် ၅၃ အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးသည် နေအိမ်၌ရှိနေစဉ် […]
အဆိုတော် ကိုမနော အနေနဲ့ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကို (၇)ရက်အတွင်း လာရောက်တောင်းပန်ဖို့ အသိပေးထားတဲ့ (ရုပ်/သံ)
July 1, 2020 AlinnPya Comments Off on အဆိုတော် ကိုမနော အနေနဲ့ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကို (၇)ရက်အတွင်း လာရောက်တောင်းပန်ဖို့ အသိပေးထားတဲ့ (ရုပ်/သံ)
ယခုသတင်းကို Voice of Myanmar page မှကူးယူဖော်ပြပါသည် အောက်ဆုံးတွင် ဗွီဒီယိုဖိုင်ပါသည် အဆိုတော်မနောအနေနဲ့ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကို (၇)ရက်အတွင်း လာရောက်တောင်းပန်ဖို့ အသိပေး တေးသံရှင်အဆိုတော် မနောရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထွက်ရှိထားတဲ့ ကိုလူပျိုသီချင်းရိုက်ကူးရာမှာ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ ‌ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတဲ့ရုပ်သံများ ပါရှိတဲ့အတွက် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူတွေဟာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်သံတွေဟာ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကျောင်းသား/သူတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ညှိးနွမ်းစေပြီး အဲ့ဒီ MTV ရိုက်ကူးချိန်က ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွေရဲ့ […]
မနောရဲ့ ဒီသီချင်းကြောင့် ကျောင်းသားတွေ တောင်းပန်ခိုင်းပြီ
July 1, 2020 AlinnPya Comments Off on မနောရဲ့ ဒီသီချင်းကြောင့် ကျောင်းသားတွေ တောင်းပန်ခိုင်းပြီ
တေးသံရှင်မနောရဲ့ လူပျို MTV ဟာ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် တစ်ပတ်အတွင်းပြန်လည်တောင်းပန်ဖို့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတချို့က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တေးသံရှင် မနောပါဝင်သီဆိုသရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒါရိုက်တာ သူကျော်သူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ လူပျိုတေးသီချင်းရုပ်သံဟာ ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်းမှာ ရိုက်ကူးထားတာ၊ ရုပ်သံမှာ သရုပ်ဆောင်ထားမှုတွေဟာ ရတနာပုံ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ ဆရာဆရာမတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်လို့ ရတနာပုံ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ […]
သားအမိနှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အပြုံးပီတိတို့နဲ့ မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းတဲ့နေ့(ရုပ်သံ)
July 1, 2020 AlinnPya Comments Off on သားအမိနှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အပြုံးပီတိတို့နဲ့ မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းတဲ့နေ့(ရုပ်သံ)
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မေသန်းနုဟာ ဇူလိုင် ၁ရက်နေ့မှာ ထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့မတိုင်မီ မိခင်ဖြစ်သူပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာ မင်းသန့်မောင်မောင်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံး မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပြီး အပြုံးပီတိတို့နဲ့ မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းတဲ့နေ့လေးဟာ တကယ့်ကိုလှပနေပါတော့တယ်။ Crd Popular Journal သားအမိႏွစ္ဦးရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ အျပဳံးပီတိတို႔နဲ႔ မိသားစုျပန္လည္ဆုံစည္းတဲ့ေန႔(ရုပ္သံ) သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ေမသန္းႏုဟာ ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔မွာ ေထာင္ကေနျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးေန႔မတိုင္မီ မိခင္ျဖစ္သူျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တာ မင္းသန္႔ေမာင္ေမာင္အတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆုံး ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ျဖစ္ၿပီး အျပဳံးပီတိတို႔နဲ႔ မိသားစုျပန္လည္ဆုံစည္းတဲ့ေန႔ေလးဟာ တကယ့္ကိုလွပေနပါေတာ့တယ္။ […]
အခွင့်အရေးရတိုင်းခိုးစားခဲ့တဲ့ပထွေးကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ရတဲ့ ၁၃ နှစ်
July 1, 2020 AlinnPya Comments Off on အခွင့်အရေးရတိုင်းခိုးစားခဲ့တဲ့ပထွေးကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ရတဲ့ ၁၃ နှစ်
ထောင်ဒါဏ်နှစ်ပေါင်း၂ဝချလိုက်တဲ့ ကောလင်းမြို့နယ်ပူတောကလုံးရွာကသက်ငယ်မုဒိန်းမှု သူ့အမည်ကစိန်ဝင်း။အသက်က(၃၆)နှစ်။လွန်ခဲ့သည့်(၁၀)နှစ်ခန့်က ကောလင်းမြို့နယ်၊ ပူတောကလုံးရွာမှ တစ်ခုလပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။မယားပါသမီးနှစ်ယောက်ပါလာသည်။ စိန်ဝင်းနှင့်ကလေးနှစ်ယောက်ရသည်။မယားပါသမီးအကြီး မိန်းကလေးအသက်(၁၃)နှစ် အရွယ်ရောက်လာတော့စိန်ဝင်းစိတ်တွေဖေါက်ပြန်လာသည်။ တစ်နေ့တွင်ကောင်မလေးအားတောထဲဟင်းရှာသွားမည်ဟုလိမ်ညာခေါ်ကာအခင်းတဲတစ်တဲ၌နားကြစဉ်ခြိမ်းခြောက်သားမယားပြုကျင်ခဲ့သည်။ တိုင်ပြောပါကသားအမိနှစ်ဦးစလုံးအားသတ်ပစ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်ထားခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီး ပထွေးဖြစ်သူကိုကြောက်ရသူမိန်းကလေးအဖို့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ရရှာသည်။ သို့ဖြင့်တစ်နှစ်ခန့်ကာလအတွင်းအခွင့်အရေးရတိုင်းခိုးစားခဲ့ရာ တစ်နေ့ကောင်မလေးအော့အန်နေမကောင်းဖြစ်၍သားအမိနှစ်ယောက်ကောလင်းဆေးရုံသွားပြတော့မိန်းကလေးတွင် ကိုယ်ဝန်နှစ်လရှိနေကြောင်း သိခဲ့ရသည်။အကြောင်းစုံမေးမြန်းသိရှိသွားသည့်မိခင်က တရားလိုပြုလုပ်၍ကောလင်းရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ကောလင်းရဲစခန်းက ကသာခရိုင်တရားရုံးသို့တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့သည်။ စိန်ဝင်းသည်မိမိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည့် အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ်မယားပါသမီးအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သည့်မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်သဖြင့် ထောင်ဒဏ်(၂၀)နှစ်ကျခံစေရန်ကသာခရိုင်ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးက(၂၃.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ SH မောင်တင့် ကောလင်း အခြင့္အေရးရတိုင္းခိုးစားခဲ့တဲ့ပေထြးေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရခဲ့ရတဲ့ ၁၃ ႏွစ္ ေထာင္ဒါဏ္ႏွစ္ေပါင္း၂ဝခ်လိုက္တဲ့ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ပူေတာကလုံးရြာကသက္ငယ္မုဒိန္းမႈ […]
ထိုင်းထီတိုုက်ရိုက် Live လွှင့်နေပါပြီနော်
July 1, 2020 AlinnPya Comments Off on ထိုင်းထီတိုုက်ရိုက် Live လွှင့်နေပါပြီနော်
အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ များများပေါက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ထိုင်းထီတိုုက်ရိုက် Live လွှင့်နေပါပြီနော် အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ များများပေါက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ထိုင်းထီတိုုက်ရိုက် Live လွှင့်နေပါပြီနော် အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ များများပေါက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
July 1, 2020 AlinnPya Comments Off on ကလေးငယ်တစ်ဦး ဘောလုံးကစားနေစဉ် လဲကျသေဆုံး
မေန႔ကညေနပိုင္း၌ ေရႊျပည္သာၿမိဳ့နယ္ ဏ/၁၄ ရပ္ကြက္တြင္ ရပ္ကြက္ေဘာလုံးကြင္း၌ ေဘာလုံးကစားေနေသာ လူငယ္ ေမာင္ထူးထူးေအာင္ (၁၅) ႏွစ္သည္ ႐ုတ္တရက္ အေမာေဖာက္ လဲက်သြားခဲ့ပါသည္။ အနီးရွိလူမ်ားက လဲက်သြားေသာကေလးငယ္အား ေရႊျပည္သာေဆး႐ုံသို့ပို့ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လမ္း၌ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။ ေသဆုံးသြားေသာ႐ုပ္အေလာင္းအား ရဲေဆးစာမ်ားယူရန္အတြက္ ေရႊျပည္သာေဆး႐ုံမွ အင္းစိန္ေဆး႐ုံသို့ Super Sunday လူမွုကူညီေရးအသင္းမွ ပို့ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ Super Sunday လူမွု့ကူညီေရးအသင္း-အင္းစိန္ မနေ့ကညနေပိုင်း၌ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဏ/၁၄ ရပ်ကွက်တွင် ရပ်ကွက်ဘောလုံးကွင်း၌ ဘောလုံးကစားနေသော […]
July 1, 2020 AlinnPya Comments Off on (၁၄)နှစ်သမီးတူမဖြစ်သူကိုသားမယားအကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်သူ
(၁၄)နှစ်သမီးတူမဖြစ်သူကိုသားမယားအကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်သူကိုအရေးယူ အမှုဖြစ်မှာ၃၀.၆.၂၀၂ဝရက်နေ့နံနက်၁ဝနာရီ၂၅မိနစ်အချိန်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်ခရိုင်၊သာပေါင်းမြို့မရဲစခန်းတွင်ဒုရဲမှုးလှိုင်ဝင်းစခန်းမှုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ဒေါ်…..(၅၀)နှစ်၊ကျဘမ်းလုပ်၊….ရွာ၊……အုပ်စု၊သာပေါင်းမြို့နယ်နေသူက၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော၉)နှစ်ခန့်က(၂၀၁၁)ခုနှစ်ခန့်ကမောင်ဖြစ်သူဦး….၏ဇနီးဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားသောကြောင့်၎င်းတို့၏ကွယ်လွန်သွားသဖြင့်၎င်း၏သမီးဖြစ်သူမ… . (၅)နှစ်အရွယ်ကိုယခုအချိန်ထိသမီးအရင်းကဲ့သို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့ကြောင်း၊၂၃.၂.၂၀၂ဝရက်နေ့တွင် ရက်နေ့တွင်မောင်ဖြစ်သူ…..သည်ငပုတောမြို့နယ်သို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှဒေါ်…….နှင့်နောက်အိမ်ထောင်ထူထောင်ကာ…….ရွာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊မောင်ဖြစ်သူဦး……..ကသူ၏သမီးမ…….ကိုကျွန်တော့်နေအိမ်တွင်ပြန်ခေါ်ထားချင်တယ်ပြောသဖြင့်မ……ကို ထည့်ပေးလိုက်ကြောင်း၊မောင်ဖြစ်သူ……၏နေအိမ်တွင်နောက်အိမ်ထောင်ဖြစ်သူဒေါ်…….၊ဒေါ်…..၏မိခင်ဒေါ်သန်းသန်း၊ ဒေါ်……၏မောင်ဖြစ်သူ သန်းနိုင်လေး(ခ)သန်းနိုင်၊ ဦး…..၏သား(၃)ယောက်တို့နှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ၁၅.၆.၂၀၂ဝရက်နေ့ခန့်ကဦး….နှင့်ဒေါ်တို့သည်တစ်ခြားကျေးရွာသို့အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာသန်းနိုင်လေး(ခ)သန်းနိုင်က၎င်းလည်းအလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရာတွင်မ….ကိုအဖော်အဖြစ်ခေါ်သွားလေ့ရှိကြောင်းအိမ်နီးချင်းကပြောသဖြင့်စိတ်မချသောကြောင့်၂၇.၆.၂၀၂ဝရက်နေ့ကနေအိမ်သို့ပြန်ခေါ်ထားခဲ့ပြီးမ…..ကိုအိမ်နီးနားချင်းများဖြစ်ကြသောဒေါ်…..၊ဒေါ်……နှင့်ဒေါ်……တို့ရှေ့မှောက်တွင်ချော့မော့၍မေးမြန်းရာ၂၀.၆.၂၀၂ဝရက်ည၁၁နာရီ၃ဝမိနစ်အချိန်ဦး…..၏နေအိမ်အရှေ့ခြင်ထောင်ထဲတွင်တစ်ီးထဲအိပ်ပျော်နေစဉ်သန်းနိုင်လေး(ခ)သန်းနိုင်သည်ခြင်ထောင်ထဲဝင်လာပြီးဘယ်သူ့မှပြန်မပြောနဲ့ပြောရင်သတ်ပြစ်ယ်ဟုပြောဆိုကာသားမယားအဖြစ်တစ်ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ၂၁/၂၂ရက်နေ့များတွင်လည်းတစ်ကြိမ်စီပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းပြောပြသိရှိရသဖြင့်တရားလိုကတူမဖြစ်သူမ…..(၁၄)နှစ်ကိုအလိုမတူပဲသားမယားအဖြစ်အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်သူ)သန်းနိုင်လေး(ခ)သန်းနိုင်(၃၀)နှစ်၊ကျဘမ်းလုပ်၊…..ကျေးရွာ၊သာပေါင်းမြို့နယ်နေသူကိုဥပဒေအရအရေးယူပေးရန်တိုင်တန်းခဲ့ရာသာပေါင်းမြို့မရဲစခန်း(ပ) ၂၈၈/၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ-၃၇၆ဖြင့်အမှုရေးဖွင့်ဆောင်ရွက်ပြီးအမှုစစ်အဖြစ်ဒုရဲမှူးလှိုင်ဝင်းမှလက်ခံစစ်ဆေးကာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရသည်။ စိုးဝင်း(သာပေါင်း)S .H ရှုထောင့်မှုခင်းနှင့်သတင်းဂျာနယ် ဝေယံသဃ်န်းကျွန်း S.H Online သတင်းထောက်ချုပ် (၁၄)ႏွစ္သမီးတူမျဖစ္သူကိုသားမယားအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္သူ (၁၄)ႏွစ္သမီးတူမျဖစ္သူကိုသားမယားအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္သူကိုအေရးယူ အမွုျဖစ္မွာ၃၀.၆.၂၀၂၀ရက္ေန႔နံနက္၁၀နာရီ၂၅မိနစ္အခ်ိန္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ပုသိမ္ခရိုင္၊သာေပါင္းၿမိဳ့မရဲစခန္းတြင္ဒုရဲမွုးလွိုင္၀င္းစခန္းမွုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ေဒၚ…..(၅၀)ႏွစ္၊က်ဘမ္းလုပ္၊….ရြာ၊……အုပ္စု၊သာေပါင္းၿမိဳ့နယ္ေနသူက၎သည္လြန္ခဲ့ေသာ၉)ႏွစ္ခန႔္က(၂၀၁၁)ခုႏွစ္ခန္႔ကေမာင္ျဖစ္သူဦး….၏ဇနီးျဖစ္သူကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္၎တို့၏ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္၎၏သမီးျဖစ္သူမ… . (၅)ႏွစ္အရြယ္ကိုယခုအခ်ိန္ထိသမီးအရင္းကဲ့သို့ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊၂၃.၂.၂၀၂၀ရက္ေန႔တြင္ ရက္ေန႔တြင္ေမာင္ျဖစ္သူ…..သည္ငပုေတာၿမိဳ့နယ္သို့သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာမွေဒၚ…….ႏွင့္ေနာက္အိမ္ေထာင္ထူေထာင္ကာ…….ရြာသို့ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ေမာင္ျဖစ္သူဦး……..ကသူ၏သမီးမ…….ကိုကၽြန္ေတာ့္ေနအိမ္တြင္ျပန္ေခၚထားခ်င္တယ္ေျပာသျဖင့္မ……ကို ထည့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း၊ေမာင္ျဖစ္သူ……၏ေနအိမ္တြင္ေနာက္အိမ္ေထာင္ျဖစ္သူေဒၚ…….၊ေဒၚ…..၏မိခင္ေဒၚသန္းသန္း၊ ေဒၚ……၏ေမာင္ျဖစ္သူ သန္းနိုင္ေလး(ခ)သန္းနိုင္၊ ဦး…..၏သား(၃)ေယာက္တို့ႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၁၅.၆.၂၀၂၀ရက္ေန႔ခန႔္ကဦး….ႏွင့္ေဒၚတို့သည္တစ္ျခားေက်းရြာသို့အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာသန္းနိုင္ေလး(ခ)သန္းနိုင္က၎လည္းအလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္မ….ကိုအေဖာ္အျဖစ္ေခၚသြားေလ့ရွိေၾကာင္းအိမ္နီးခ်င္းကေျပာသျဖင့္စိတ္မခ်ေသာေၾကာင့္၂၇.၆.၂၀၂၀ရက္ေန႔ကေနအိမ္သို့ျပန္ေခၚထားခဲ့ၿပီးမ…..ကိုအိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာေဒၚ…..၊ေဒၚ……ႏွင့္ေဒၚ……တို့ေရွ႕ေမွာက္တြင္ေခ်ာ့ေမာ့၍ေမးျမန္းရာ၂၀.၆.၂၀၂၀ရက္ည၁၁နာရီ၃၀မိနစ္အခ်ိန္ဦး…..၏ေနအိမ္အေရွ႕ျခင္ေထာင္ထဲတြင္တစ္ီးထဲအိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္သန္းနိုင္ေလး(ခ)သန္းနိုင္သည္ျခင္ေထာင္ထဲဝင္လာၿပီးဘယ္သူ႔မွျပန္မေျပာနဲ႔ေျပာရင္သတ္ျပစ္ယ္ဟုေျပာဆိုကာသားမယားအျဖစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း […]
July 1, 2020 AlinnPya Comments Off on ယခုနှစ်တောင်ပြုံးပွဲတော်ကျင်းပနိုင်ဦးမှာလား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည့် တောင်ပြုန်းပွဲတော်ကို ယခုနှစ်တွင် ကိုဗစ် ၁၉ ဂယက်ကြောင့် ကျင်းပနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ကျော်က ပြောသည်။ တောင်ပြုန်းပွဲတော်ကို အနော်ရထာမင်းတည်ထားခဲ့သော ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားပွဲတော်နှင့်အတူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မတ္တရာမြို့နယ်ရှိ တောင်ပြုန်းကြီးကျေးရွာတွင် နှစ်စဉ် ဝါခေါင်လအတွင်း ရှစ်ရက်ကြာ ကျင်းပလေ့ရှိသော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မူ လတ်တလောအခြေအနေများကြောင့် ပွဲတော်ကျင်းပရန် မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း ဦးကျော်ကျော်က ပြောသည်။ “ကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့် ဘုရားပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့၊ ဒါမှမဟုတ် တောင်ပြုန်းအရှင်နှစ်ပါးပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်က […]